🥇 ▷ Ku fiiri barnaamijyada aad ugu jeceshahay shaashadda multitasking-ka ee iPhone-ka ah ee caanka ah ✅
Ku fiiri barnaamijyada aad ugu jeceshahay shaashadda multitasking-ka ee iPhone-ka ah ee caanka ah
Si fudud u hel barnaamijyada ugu isticmaalka badan iyo kuwa aad u jeceshahay ee ka soo jeeda iPhone App Switcher oo leh weelka ugu caansan
Caanka ah waa tweak cusub oo ku soo dhaca aaladaha leh Jailbreak iyo taas ku beddelo xiriirada dhowaanta ah iyo kuwa aad ugu jeceshahay ee laga heli karo dusha sare ee App Switcher ama Multitasking kuna bilaabaya barnaamijyada xiisaha leh. Soosaaraha barnaamijyada caanka ah wuu ka duwan yahay qaababka kale ee noocan ah maxaa yeelay wuxuu amraa astaamaha barnaamijyada ee ku saleysan isticmaalka aan ka sameyno iyaga. Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan tweakkan, wax naga sii, qeybta hoose.
Baadhitaanno caan ah kuwaas oo ah barnaamijyada loo adeegsado badankood isla markaana waxay kuu oggolaanayaan inaad abuurto liiska madow ee barnaamijyada
Caanka ah waa tweak kaas oo hubaal ka dhigi doona in ka badan hal isticmaale kaas oo kuxiray qalabkooda macruufka 8 ee ku faraxsan. Shaqadiisu waxay wanaajisaa dabeecadda wax soo saar ee aaladda su’aasha maadaama ay noo oggolaan doonto suurtagalnimada si sahal ah uga hel dhammaan codsiyada si toos ah looga isticmaalo shaashadda macruufka 8 ee macruufka oo aan heli karno adoo riixaya badhanka guriga laba jeer oo isku xigta.
Tilmaanta su’aasha waxay mas’uul ka noqon doontaa beddelka booska ay isticmaaleen xiriiriyeyaasha dhowaan iyo kuwa ugu cadcad barnaamijyadeenna aan aad u jecel nahay oo aan sida badan u adeegsanno. Tani waxay wax badan ka tari doontaa Way fududahay in si dhakhso leh loo helo oo loo bilaabo barnaamijyada ku caansan iPhone-keena.
Isku shaandhayn la mid ah, Caan ah, ayaa mas’uul ka noqon doonta la socoshada kuwaas oo ah dalabaadka aan sida ugu badan u isticmaalno oo ugu badan, marka lagu daro, mahadsanid guddiga xulashada, oo ku dhex jira aaladda Aaladda, aagna maheyn doonno fursad aan ku dooranno midkee waa dalabyada aan rabno in loo muujiyo kuwa ugu cadcad, laakiin Waxaan kaloo abuuri karnaa nooc liiska madow ama liistada codsiyada taas oo, in kasta oo aan u isticmaalno codsiyada qaar si isdaba joog ah, kumana muuqan doonaan shaashadda multitasking ama app switcher.
Kalasoco caan ku ah iPhone oo leh Jailbreak
Hadaad rabto tweakkan, Caan ah Waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo Cydia gudaha bakhaarka BigBoss $ 0.99, qiyaastii € 0.87. Si aad u rakibto tweak waxaad u baahan doontaa iPhone leh Jailbreak iyo xiriir internet oo aad ku soo dejiso xirmada ay ku jiraan. Haddii aadan wali haysan oo aad xiiseyneyso Jeer Jeegaanta iPhone, ha seegin tilmaamaheena si aad uga qabato kombuyutarada Mac iyo Windows. Tweak-kaani wuxuu la jaan qaadayaa aaladaha taageeraya macruufka 8 iyo noocyada sare ee nidaamka hawlgalka mobilada ee Apple.